izinkomo zondla ama-pellet mill,inqubo yokwenziwa kwezinkomo
Amandla:18.5kw izigaba ezintathu
Ikhono:600~ 700kg / h
Yini i-Cattle feed Pellet?
Izinkomo feed pellet iyi-in-one pellet form feed feed eyenziwe umshini wokudla izinkomo ngokucindezela okukhulu. Kuluhlobo lokuphakelwa okungagcini izinkabi kuphela, izinkomo, izinkomo kodwa nezezimvu, futhi bakhuliswa ngembuzi ubisi lwabo nenyama. Inamaprotheni, amaminerali kanye nezinye izakhamzimba eziwusizo ekukhiqizeni inyama yenkomo nobisi nokusinda ezilwaneni.
Kungani Yenza Izinkomo Zokudla Zenkomo?
Njengoba imboni yezinkomo ithuthuka ngokushesha eminyakeni yamuva, okuphakelayo kwendabuko akusakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuphakelwa. Abalimi bafuna ukuthola olunye uhlobo lomkhiqizo wokuphakela okulula ukuluthola, kulula ukuyigcina, ukondliwa kwezilwane futhi kubiza kancane. Akunakwenzeka? Zama i-pellets yokondla izinkomo. Ama-pellets okuphisayo anempilo futhi anokudla okunempilo ukwedlula ukwedlula owendabuko. Izinto zokusetshenziswa kwama-pellets okuphakela zingaba ngotshani noma izinsalela zokusanhlamvu okulula kakhulu ukuzithola, futhi kuwuhlobo lwesixazululo esiluhlaza futhi sokuphinda usebenzise lezi zinsalela ngakolunye uhlangothi. Ngaphandle kwalokho, izithako ezisekelweni lokuphaka zihlanganiswa kahle, ngakho-ke lapho izinkomo zidla ukudla, ngeke zisakwazi ukufaka okuphakelayo okuthile noma isithako. Lokhu kuqinisekisa ukulinganisela kokudla okunempilo. Ungenza nezindlela zokupheka zenkukhu, ingulube, izinkomo, inhlanzi noma ezinye izilwane ngokulandelana, zixube futhi uzenze ama-pellets, ukuze ukwazi ukuthola ama-pellets okuphakela kuzo zonke izinkukhu zakho nemfuyo.
Izinto ezihlanza ukwenziwa kokwenza ukudla okufuya izinkomo
Ama-pellets e-feed wezinkomo angalungiswa kumakhekhe ama-oyela, izinsalela ze-agro ezinjenge-peanut seedling, utshani, utshani bommbila, utshani bukakolweni, okusanhlamvu, ukolweni bran njll., imikhiqizo kafulawa, okusanhlamvu, molasses, njalo njalo.
inqubo yokwenza ama-Cattle feed Pellets
Imisebenzi emikhulu ebandakanyekayo ekwakhiweni kwama-pellets okondla izinkomo yile: Ukulungiswa kwezinto zokwenziwa, Ukuchotshozwa ngokuyinhloko, ukuxubana kwe-molasses, Ukuchotshozwa kahle, Ukwenza i-pellet nokupakisha(ngokuzithandela)
★ Izinto ezisetshenziswayo ezingavuthiwe nezisizayo kuqala zikhokhiswa zibe ngama-silos namathangi lapho zenziwa zilungele ukuqhutshelwa phambili. Ngemuva kwalokho kusetshenzwa nge-crusher eyinhloko. Izinto ezisikiwe zibuye zihlukaniswe ngokusebenzisa isihlungo, bese ligcinwa emathangini okulinganisa ngohlobo lwezinto ezinguluhlaza.
★ Izinto zokusetshenziswa zixutshwa nge-mixer feed. Kule nqubo, izithako ezinamafutha zengezwa ezintweni ukuze kuphakanyiswe inani lokudla okuphakelayo. Okuphakelayo okutholwe ku-mixer kuhlanganiswe nama-molasses.
Okuphakelayo kwezilwane okuchotshoziwe kube izinhlayiya ezicolekileyo kubuye kwenziwe ama-pellets yi izinkomo zidla ama-pellet mill.
Izici zomshini wokugaya izinkomo we-pellet mill
1. Ukusebenza kahle okuphezulu nokukhishwa kwamandla amancane: Ngomklamo wayo onengqondo nangobungcweti, umshini uyondla bese ucindezela ngokulinganayo, futhi ikhipha ama-pellets ngomonakalo ophansi
2. Ama-pellets awakhiqizayo abushelelezi futhi, ubunzima obungcono.
3. Umshini we-pelletizer oshukumisayo onemoto, akwenzi fume wamafutha noma ukungcoliswa.
4. Izingxenye ezinamandla eziqinile, okufana nokuthi i-roller futhi ifile yenziwa ngensimbi ephezulu ye-alloy tata.
5. Kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-pore diameter flat die ukukhetha.
6. Lolu chungechunge lwemishini yokufuya izinkomo lungaveza ukucindezela kwezinhlayiya ze-biomass ezinjenge-sawdust, utshani, amakhoba nezinye izinhlayiya.
Ipharamitha Yobuchwepheshe Bezinkomo Zokudla Okuphakelayo Kwezinkukhu
Ikhono(kg / h)
Ijubane(r / imizuzu)
Ukukhipha Ubukhulu (mm)
Ividiyo yezinkomo ezondla izinkomo